कांग्रेस एकातिर, एमाले अर्कातिर, चाबी कतातिर ? - Ratopati
नेपाली राजनीतिमा अहिले ठूलो ताला लागेको छ । चाबी कोसंग छ थाहा छैन । संविधान संशोधन ताला लागेको हालतमा छ । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई लगाइएको महाभियोगको ताला खुलेको छैन । स्थानीय चुनावमा ताला लागेको बीस वर्ष भयो, ताला खुल्ने छाँट छैन । संविधान कार्यान्वयन अहिले पनि भइरहेको छ तर यसको भविष्य धरापमा छ । चुनाव नभई संविधान बाँच्न सक्दैन । चुनावमा ताला लागेको छ । समग्रमा हेर्दा नेपाली राजनीति तालामय भएको छ, सर्वत्र ताला लागेको छ तर चाबी भेटिएको छैन । बारम्बार नक्कली चाबी लगाएर खोल्ने प्रयास हुन्छ तर ताला खुल्दैन । अहिले पनि संविधान संशोधन विधेयक ल्याएर राजनीतिमा लगाइएको ताला खोल्ने प्रयास गरियो तर चाबी मिलेन । चाबी मिलेको भए संसदमा दुई तिहाई पुग्ने थियो ।
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई(३९७ सांसद) पुग्यो भने पनि त्यसले स्थायी समाधान दिने छैन । किनभने संशोधन भएपछि पनि भारत र मधेसी मोर्चाका दर्जनौं माग र एजेण्डा बाँकी नै रहने छन् । किस्तावन्दीमा माग पूरा गराउने प्रयास स्वरुप संविधान संशोधन भाग–२ ल्याइएको हो । भाग एक अर्थात् संविधान संशोधन भाग–१ पहिले नै मञ्चन भइसकेको छ । जसरी भाग–१ ले समाधान दिएन, त्यसैगरी भाग–२ ले पनि समाधान नदिने निश्चित छ । संविधान संशोधन पारित भएपछि मधेसवादी दलहरुले खुसीयाली मनाउने छैनन्, आन्दोलनको तयारी थाल्नेछन् । उता, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्व चाहिं हेरेकोहेर्‍यै हुनेछ ।
कतिपटक संविधान संशोधन गर्‍यो भने मुलुकले निकास पाउँछ ? अनि जनताले विकास पाउँछन् ? देशले आराम पाउँछ ? संविधान स्वस्थकर हुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो । प्रश्न यतिमा सीमित छैन । मधेसवादी दलहरुसंग मात्र होइन, अन्य विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुसंग पनि एजेण्डाको भण्डार छ । हिन्दू राष्ट्र बनाउने माग र राजतन्त्र पुनरस्थापनाको अभियान विकराल बन्दै आइरहेको छ । उता संघीयता विरोधी अभियान पनि तेज हँुदै आइरहेको छ । वर्तमान राजनीतिक दल र नेताहरुप्रति जनतामा चरम वितृष्णा र असन्तुष्टि छ । देश ठप्प छ, विकास ठप्प छ, आर्थिक प्रगति ऋणात्मक नहुनुमै सन्तोष गरेर बस्न परेको छ । समाजमा असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना बढ्दो छ, जातिपातिको नारामा देशलाई विभाजित गरिंदैछ । कतै हेर्दा पनि आशलाग्दो अवस्था देखिंदैन । तर, याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने निराशाकै बीचबाट आशा र सम्भावनाको उदय हुने हो । अँध्यारोपछि नै उज्यालो आउने हो ।
फर्किएर हेर्‍यौं भने के देखिन्छ भने जबजब कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउँछन् तब देशले निकास पाएको छ, जबजब कांग्रेस र एमाले दुई कित्तामा विभाजित हुन्छन् देशले विनाश भोगेको छ ।
देशमा निरासा छ तर देशको भविष्यमा ताला लागिसकेको छैन । राजनीतिक गतिरोध नेपालको नियति नै भइसक्यो डेढ दशकदेखि । यस्तै गतिरोधबीच मुलुकले फड्को मारेको बिर्सन हुन्न । केही भएको छैन भनेर निराश हुने ठाउँ प्रशस्त छ तर धेरैथोक भएको पनि देख्न सकिन्छ । सम्भावनाका नयाँ नयाँ ढोकाहरु पनि खुलिरहेका छन् । जनजागृति आएको छ, जनचेतना बढेको छ । युवापुस्ताको नयाँ र जागरुक जमात तयार भएको छ । सरकारका कामकारवाहीमा खबरदारी गर्ने नागरिक जमातको विशाल पंक्ति तयार भएको छ । इन्टरनेट आधारित सामाजिक संजालका कारण देशमा विचारको प्रवाह र नयाँनयाँ विचारको आगमन तीब्र रुपमा भइरहेको छ । आशा गर्ने ठाउँ अनेक छ तर समग्र राजनीतिमा ताला लागेको छ । समस्या यही हो ।
समाधान के त ? जसले पनि सोध्ने प्रश्न हो यो र कसैले जवाफ भेट्न नसकेको प्रश्न पनि यही हो । मुलुकमा ठूलो राजनीति गतिरोध हुँदा पनि अवतरण दिने काम कांग्रेस र एमाले मिलेर गरेका थिए भन्ने नभुलौं । माओवादी जनयुद्धलाई सेफल्याण्डिङ गराउने काम कांग्रेस र एमालेले नै गरे । गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभा चुनाव, नयाँ संविधान जारी गर्ने काम पनि कांग्रेस र एमालेको मिलापले मात्र सम्भव भएको थियो । फर्किएर हेर्‍यौं भने के देखिन्छ भने जबजब कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउँछन् तब देशले निकास पाएको छ, जबजब कांग्रेस र एमाले दुई कित्तामा विभाजित हुन्छन् देशले विनाश भोगेको छ । कांग्रेस र एमाले एकठाउँ उभिंदा जस्तै गतिरोध पनि समाधान भएको छ । अब पनि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ उभिए अनि यिनले माओवादी केन्द्र सहितका राजनीतिक शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याए भने विदेशी शक्तिहरुले खेल्ने ठाउँ पाउँछ र ? अतिवादी शक्तिहरुले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् र ? निश्चय पनि पाउँदैनन् ।
कांग्रेस र एमाले दुई कित्तामा उभिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा लागेको ताला खोल्ने प्रयास समयको बर्बादी मात्र हो । यी दुई भिन्न कित्तामा उभिंदा राष्ट्रिय राजनीतिका अनेक ढोकामा ताला लाग्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । गणतान्त्रिक संविधान साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने हो भने यी दुई शक्ति एक ठाउँ आउनैपर्छ, चुनाव गर्नैपर्छ । योभन्दा अर्काे समाधान हुँदैन र छैन पनि भन्ने कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीका नेताहरुले बुझेका छन् तर एक अर्कालाई निषेध गर्दैमा यिनलाई फुर्सद छैन । यही कारणले नेपालको राजनीति दुर्गन्धित हुँदैछ र देशले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था खेप्न बाध्य हुनु परेको छ । सबै नेतालाई चेतना भया †